UMasipala nenqina yokulwisana namawuwa – Msunduzi News
UMasipala nenqina yokulwisana namawuwa
UKUVELA kwezindaba ezishaqisayo zokusatshalaliswa kwemikhiqizo yokudla engamawuwa kuthuse abantu abaningi kwadala nokwesaba ukuthi le mikhiqizo ingase idale izifo kubantu. Ngokwemibiko kanjalo nobufakazi obuvele ngesikhathi kuba khona ababoshwayo ithi kunezigilamkhuba ezisabalalisa imikhiqizo yokudla engamawuwa nokuvele ukuthi isatshalaliswa kakhulu ezindaweni zaboHlanga. Kuthiwa le mikhiqinzo uma unganakile ungafunga ukuthi ingeyangempela. Lobu bugebengu bubikiwe naseMsunduzi nokwenze uMasipala uthathe izinyathelo ezinqala.
Ngokohlelo lophiko olubhekene nokuBhaliswa Kwamabhizinisi (Business Licencing), enye yezindlela zokubhekana nalesi simo wukuqinisekisa ukuthi amabhizinisi ahweba eMsunduzi abhaliswe ngokusemthethweni nokuzokwenza kube lula ukwelusa ukusebenza kwawo.
Sicacisa ngalokhu isikhulu sakwaBusiness Licensing uMnu uMandla Sithole sithe umkhankaso abawuqalayo bahlose ngawo ukubhekana ngqo namabhizinisi angekho emthethweni, nezitolo ezidayisa imikhiqizo engaba nobungozi emphakathini. “Sesibheka zonke izakhiwo ezakhiwe ngokungekho emthethweni, sishaqa yonke imikhiqizo engamawuwa nesiphelelwe yisikhathi ngoba ubukhona bayo bubeka impilo yezakhamuzi engozini,” kusho uSithole.
Leli phephandaba lihambe namathimba abevela kuMasipala nabehlola aphinde ashaqe imikhiqizo. Phakathi kwezinto ezitholakele nebeziphelelwe yisikhathi noma amawuwa kutholakale le mikhiqinzo elandelayo; iBetasol, iDiprison, iMovate, iLemovate, iCarotone neCarolite. Okunye okutholakele wukuthi amakhekhe asedlulelwe isikhathi abedayiswa ngamanani aphansi. Khona lapho kutholakale namaphilisi asephelelwe yisikhathi.
Omunye obekhona ngesikhathi kuphunywe inqina bekunguMnu uDumisani Mzila obephuma eMnyangweni Wezomnotho, Ezokuvasha Nokungcebeleka Nokongiwa Kwemvelo nothe: “Sithola imithi okumele engabe ikhishwa ngegunya lomuntu okufundele ukwenza lokho, njengoba sithola amaphilisi abathi alapha ukhwantalala, la maphilisi kumele ngabe uwathola ngemvume kadokotela. Okwesibili laba abenza lokhu akufanele nawukuthi badayisa imithi ngoba abanayo imvume,” kusho uMzila.
UMzila uphethe ngokuthi akusizi ukuthi kubhekwe laba kuphela kungahlonzwa izizinda lapho beyithola khona imithi, “Sifuna baboshwe laba bantu ababulala isizwe bedayisela laba bantu abangenalwazi olwanele abathenga kulezi zitolo imithi.”
UMsunduzi uziqwaqwade amakhanda kumatikuletsheni
Ukunikezela ngezindlu kuMasipala kusenguginqigonqo
Previous post: Isimo sisenguginqigonqo
Next post: Uhlelo loMsunduzi lokusabalalisa umnotho